Mbupu - Buddhatrends
Anyị na-ebu ụgbọ mmiri na-ekpuchi North na South America, Europe, Asia, Africa, Oceania, na ndị ọzọ. Anyị na-eji ọrụ ndị isi ụgbọ elu, ndị a tụkwasịrị obi kwadoro na ngwugwu gị ruru ebe ị na-aga n'enweghị nsogbu.
Iwu na-eburu 7 ụbọchị iji hazie tupu ha ebuo - na-ewepu ngwụsị izu na ezumike. N'oge nhazi oge ezumike nwere ike iburu 14 ụbọchị.
A ga-ebufe iwu US site na e-pa na Iwu nke Mba ga-eziga dabere na mmezu nke etiti ngwaahịa ahụ si.
Oge njem gaa United States: 12 - 20 Business ụbọchị
E nwere ọnọdụ ndị na-adịghị achịkwa (ọdachi ndị na-emere onwe ha, ezumike, ihu igwe, wdg) nke nwere ike ime ka mwepụ ndị mbupu. Ọ bụ ezie na ọtụtụ nchịkọta ga-abịa na oge, ọ nwere ike ịnwe ọnọdụ na nkwụsị na ndị na-ebu anyị nwere ike ịnata. N'ihi nke a, anyị anaghị ekwe nkwa inyefe oge; ihe nnyefe ahụ bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ mbupu.
GỊNỊ KA A GA-EKWU NDỊ NA-ECHICHE?
Ọrụ ozi na-adabere na etiti anyị mezuru. Nke a bụ n'ihi na ngwaahịa anyị na-esi mba dị iche iche sụgharịa iji jide n'aka na ị ga-enweta ego kacha mma maka ya. Ọrụ ndị ozi dịgasị iche iche site n'otu mba gaa n'ọzọ. Enweghị ụlọ ahịa azụmahịa siri ike na ọrụ ozi, anyị enweghị ike inweta ọnụego dị ọnụ ala n'ihi ya na ngwa ngwa anyị ga-atụfu n'ahịa ụwa dị ka Amazon na ihe ndị ọzọ.
Anyị na-eme ike anyị niile iji belata ọnụ ahịa na njedebe gị ka ị ghara ịkwụ ụgwọ ụtụ isi na ụtụ isi maka inweta ihe gị. Ọ bụrụ na ị na-etinye iwu na anyị maka ọtụtụ ihe ọ bụ karịa ka ọ ga-esi na-eziga na ihe karịrị otu ngwugwu. Biko mee ka oge ụfọdụ maka ihe niile ị ga - abata.
Ọnụahịa kpughere na akwụkwọ azụmahịa gịike dị iche na ihe ị nyere iwu kama biko echegbula. Ugboro ihe ihe imezu anyị ga-eme bụ iji akara dị oke ọnụ ala ma ọ bụ jiri akara dị ka onyinye zuru oke. Nke a bụ igbochi ọnụahịa / omenala mbubata na-eweta na njedebe gị maka ụfọdụ mba ndị ọzọ ebubo ndị a dị oke ọnụ.
Onye ọ bụla nọ n'ụlọ nwere ike ịnweta ngwugwu ahụ maka onye ahịa. N'ikpeazụ, onye na-esote ya ga-ahapụ nchịkọta nchịkọta ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye nọ n'ụlọ ma ị nwere ike ịnakọta ngwugwu gị na ụlọ ọrụ nzipu kachasị dị gị nso.
Ọ bụ ezie na anyị na-agba gị ume nke ukwuu ịlele nyocha na ọnụọgụ abụọ tupu ị debe anyị n'usoro, anyị ghọtara nke ọma na ihe nwere ike ime ma mehie. Anyị na-ahazi iwu otu ụbọchị a na-edebe ha. Ọ bụrụ na a ghaghị ịgbanwe mgbanwe gị n'usoro iwu gị biko kpọtụrụ anyị site na kọntaktị ahụ na saịtị anyị ASAP ma anyị ga-eme ike anyị niile iji nweta mgbanwe ahụ, mana anyị enweghị ike ime nkwa ọ bụla. Ọ bụrụ na e zigara ihe (s) ahụ site na ebe mmezu anyị, anyị agaghị enwe ike ịgbanwe. N'okwu ahụ, ị ​​nwere ike izipu ihe ahụ gaa na Ụlọ Nzukọ Ugwu kachasị nso ma ozugbo a natara anyị nwere ike izipu ihe edozi. Biko kpọtụrụ anyị ka anyị chọpụta ebe dị nso na Ụlọ Nzukọ Alaeze kacha nso na mba gị.
Biko kpọtụrụ anyị na anyị ga-enwe obi ụtọ ịza ajụjụ ọ bụla!